Wefti Ka Socday Midawga Yurub Oo Kulan La Yeeshay Musharaxa Madaxweynaha Kulmiye | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Wefti Ka Socday Midawga Yurub Oo Kulan La Yeeshay Musharaxa Madaxweynaha Kulmiye
Hargeysa(SDWO): Wefti isugu jira diblomaasiyiin iyo safiirro oo ka socday ururka midawga Yurub iyo dalal kale ayaa maanta kulan la yeeshay murrashaxa madaxweynaha xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi.
Weftigan ayaa Somaliland u yimid sidii u qiimayn lahaayeen doorashadii madaxtooyada ee shalay ka qabsoontay dalka.
Kulankaasi ay weftigu la yeesheen murrashaxa madaxweynaha KULMIYE waxaa ku wehelinayay saraakiil xisbiga ka tirsan oo ay ka mid yihiin Guddoomiye-ku-xigeenka labaad ee xisbiga KULMIYE Md. Axmed Cabdi Dheere, Prof. Axmed Ismaaciil Samatar, aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen iyo xubno kale.
Kulankaasi oo ka qabsoomay Hutel Ambassador ee magaalada Hargeysa maanta waxa uu la qaatay xubno safiirro iyo diblomaasiyiin isugu jirta oo ka socota dalalka Norway , Sweden, Belgium, Switzerland, Netherland, UK, Denmark, Finland iyo xafiiska Midowga Yurub.
Diblomaasiyiinta iyo safiirrada, ayaa si waafi ah murrashax uga mahadceliyey sida uu diyaarka ugu yahay inuu dhinaciisa ka dhawro deggenaanshiyaha wadajirka bulshada reer Somailand, siina ambo-qaado horumarka dhinaca dimuqraaddiyadda ah ee Somaliland tusaalaha tolmoon ugu tahay dalalka ku yaalla qaaradda Afrika iyo waddamo badan oo dunida kamid ah.
Geesta kale murrashax Muuse Biixi Cabdi, ayaa dhinaciisa waxa uu si xeel-dheer uga xog-warramay safiirrada iyo diblomaasiyiinta ka socday dalalka Midowga Yurub inay murrashax ahaan ka go’antahay sii ambo-qaadista horumarka Somaliland ka jira iyo Dimuqraaddiyadda xawliga ku socota, isla markaana uu diyaar u yahay inuu ka dhursugo natiijada ku laalan dhinaca Komishanka qaranka.
Markay soo baxdana uu aqbali doono, haddii laga guulaysto iyo haddii uu guulaystaba.
Dhinaca kale weftigan danjireyaasha iyo diblomaasiyiinta isugu jira waxay kulan isla maanta kulan la yeesheen musharaxa kursiga madaxweynaha Waddani C/raxmaan Cirro.